IValencia ifumana izithuthi ezitsha zombane kwizithuthi zayo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IValencia ifumana izithuthi ezitsha zombane kwizithuthi zayo
IsiJamani sasePortillo | | I-Autogas, Izithuthi zombane
Izithuthi zombane sisixhobo esihle sokunciphisa ungcoliseko kwizixeko ezijongene nezothutho. Ke, Izithuthi zombane ezitsha ezili-18 zongezwa kwizithuthi zothutho eValencia.
Ngaba uyafuna ukwazi izibonelelo zesithuthi sombane kwaye zonyuke njani kule minyaka idlulileyo?
1 Izithuthi ezitsha zombane eValencia
2 Okutsha ngakumbi kunye nozinzo
Izithuthi ezitsha zombane eValencia
Uceba woMjikelo waManzi oHlanganisiweyo, uVicent Sarrià, u-CEO we-Global Omnium, u-Dionisio García Comín, kunye nomphathi jikelele we-IVACE, i-Julia Inkampani, bathathe inxaxheba ekunikezelweni kwezithuthi ezitsha eziza kusetyenziswa yinkampani kwisixeko IValencia.
Ezi ziimodeli ezintsha ze I-100% yezithuthi zombane ezibonelela ngozinzo kunye nentlonipho yokusingqongileyo okudingwa yimozulu yethu.
Baninzi abantu ababhubha ngonyaka abathi ungcoliseko lomoya luthathe ezixekweni ngenxa yezithuthi ezindleleni kunye namashishini. Utshintsho kwimoto yombane luqala kancinci, kodwa ngokuthe ngcembe okoko ukufakwa kwalo ezixekweni kunzima.
Iimodeli ezibandakanyiweyo eValencia zezi Renault Kangoo ZE kunye Zoe kunye nokuzimela kwabo 240 no 400 km, ngokulandelelana.
Ukusebenza ngokuchanekileyo kunye nokusetyenziswa ngokulula kwezi zithuthi, kufakelwe iindawo zokutshaja ezingama-26 kumbindi weVara de Quart ziinkampani iEmivasa kunye neGlobal Omnium. Oku kubonisa ukuba izithuthi zombane zinokunyuka ngakumbi nangakumbi kwiminyaka ezayo.
Kuyimfuneko ukonyusa inani lezithuthi zombane ukuba sifuna ukunciphisa ukukhutshwa okungcolisayo. Impilo yabo bonke isezandleni zethu, nangona ingumsebenzi onzima kwaye onamabhongo.
Utshintsho lwemozulu, njengoko sisazi, yinyani esichaphazelayo sonke ukusuka kwihlabathi ukuya kwindawo. Ke ngoko, i-Global Omnium ijonge ukufaka isandla kwisisombululo sale meko esinokuchaphazela kwindlela yethu yobomi kunye nemithombo yamanzi.
UDionisio García ugxininise oku kulandelayo:
"Besisoloko sizibonakalisa siyinkampani ebandakanyekayo eluntwini kwaye, kungenjalo kungenjalo, siza kuqhubeka nokucebisa ngezisombululo ezinegalelo kwimpilo yabo kunye nokusetyenziswa kwezithuthi zendalo yenye yazo".
Ukunciphisa iziphumo zongcoliseko kunye notshintsho lwemozulu, ukufunyanwa kwezi zithuthi zijikelezayo kuya kunciphisa ukukhutshwa kwe ngaphezulu kweetoni ezingama-30 ze-CO2 emoyeni, ukuba yenye yeegesi ezinegalelo kakhulu kubushushu bomhlaba.
Esi sigqibo sibangelwe sisicwangciso-qhinga sobumbano esineenjongo zokutshintshwa ngokuthe ngcembe kweedizili nezithuthi zepetroli kufakwe ezizinzileyo ezinegalelo kulondolozo lwendalo.
Okutsha ngakumbi kunye nozinzo
IGlobal Omnium ibandakanya itekhnoloji entsha kuhlobo lwezithuthi zendalo ezinganciphisi ukusebenza kodwa ezinegalelo kulondolozo lwendalo kuluntu oluzimeleyo lwaseValencia.
Okwangoku, Izithuthi ezingama-33 zendalo ezifakiwe (13 i-LPG kunye ne-20 yombane), kucwangciswa ukubandakanya enye i-15 kunyaka olandelayo (4 LPG, 7 electric and 4 hybrids). Eli nyathelo lonyusa uzinzo kwaye liqinisekisa umgangatho wendalo esingqongileyo kwizizukulwana ezizayo, kuba ungcoliseko lomoya luyehla.
Olu hlobo lophuhliso lwetekhnoloji, iValencia ibisoloko ingoyena ndoqo. Ukwamkelwa kwezithuthi zombane eValencia kongeza kwimpumelelo kubuchwephesha obufezekisiweyo kule minyaka idlulileyo. Oku kwenza iValencia Idolophu enkulu yokuqala ezinikele kugcino lwendlela.
Inxalenye yolwazi exhasa le mpumelelo kukwamkelwa kwengxelo ye-Innovation kunye neSixeko, epapashwe liZiko leKamva leDolophu (i-CUF) kunye neWagner Innovation Labs, ye-NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, eNew York , apho ukufundwa okude kweemitha ze-smart eziphuhliswe yi-Global Omnium, kwisixeko saseValencia, kubonakala njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwihlabathi ezili-15, ezenziwa kwiminyaka yakutshanje.
Njengoko ubona, ukunyuka kwezithuthi zombane kuya kusondela ngokusondela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Itekhnoloji entsha » Izithuthi zombane » IValencia ifumana izithuthi ezitsha zombane kwizithuthi zayo
I-United States kunye ne-China iinkokheli ezipheleleyo kumandla omoya
IAlbacete liphondo elivelisa awona mandla omoya eSpain kwaye elesithathu kwi-photovoltaic